त्रिशूली नदीमा देखियो चकित हुने यस्तो दृष्य !
गृहपृष्ठ » समाचार » त्रिशूली नदीमा देखियो चकित हुने यस्तो दृष्य !
धादिङ । धादिङमा त्रिशूली नदीमा सबै चकित हुने दृष्य देखिएको छ । त्यहाँ नदीमा आगो बलिरहेको थियो । देख्नेहरु त एकछिन चकित नै बने । तर त्यो तेल बोकेको ट्याङ्कर त्रिशूली नदीमा खसेर आगो बलिरहेको रहेछ । त्यसपछि मात्र मानिसहरु उद्धारमा खटिए ।
ना ४ ख २८२२ को पेट्रोल ट्याङ्कर धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ चिरौदीबाट त्रिशूली नदीमा खसेर आगलागी भएको हो । ट्याङ्करमा रहेका चालक र सह–चालक बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक नेत्र भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
नदीमा खसेको गाडी पानीमा डुबेको छ । केही भाग देखिएको छ । अहिले उद्धार कार्य भइरहेको गजुरीका प्रहरी निरीक्षक भट्टले बताउनुभयो । तर स्थानीयले देख्दा पानी माथी नै आगो बलिरहे जस्तो देखिन्थ्यो । त्यो कसरी भयो भन्ने खुल्न आएको छैन ।